39 “Wava kuziva here nguva yakatarwa inobereka mbudzi dzomumakomo dzinogara mumabwe?+Unoona here panobereka+ nondo hadzi ichirwadziwa kwazvo? 2 Unoverenga mwedzi yadzinopedza here,Kana kuti wava kuziva here nguva yakatarwa yadzinobereka? 3 Dzinokotama padzinobudisa vana vadzo,Padzinobvisa marwadzo adzo. 4 Vanakomana vadzo vanova vakasimba, vanokurira musango;Vanoenda vorega kuzodzokazve kwadziri. 5 Ndiani akaregedza mbizi+ yakasununguka,Uye ndiani akasunungura zvisungo zvembongoro yomusango, 6 Zvandakapa bani rerenje kuti rive imba yazvoUye zvandakapa nyika ine munyu+ kuti ive nzvimbo dzazvo dzokugara? 7 Inoseka nyonganyonga yomuguta;Hainzwi ruzha rwomunhu anonyangira.+ 8 Inofamba-famba mumakomo ichitsvaka mafuro ayo+Uye inotsvaka zvinomera zvemarudzi ose zvakasvibirira.+ 9 Nzombe yomusango ingada kukushandira here,+Kana kuti ingarara pachidyiro chezvipfuwo zvako here? 10 Ungasunga kwazvo nzombe yomusango netambo dzayo iri mumuforo here,Kana kuti ingakutevera ichiputsa mavhinga+ mumapani here? 11 Ungavimba nayo nokuti simba rayo rakawanda here,Uye ungarega basa rako rakaoma kuti riitwe nayo here? 12 Ungavimba nayo kuti ichadzosa zviyo zvakoUye kuti ichazviunganidza paburiro rako here? 13 Bapiro remhou sheche rakambobhabhama nomufaro here,Kana kuti ine mapapiro neminhenga zvakaita sezveshuramurove+ here? 14 Nokuti inosiya mazai ayo muvhuUye inoachengeta achidziirwa ari muguruva, 15 Uye inokanganwa kuti angapwanyiwa netsokaKana kuti angatsikwa nechikara. 16 Inobata vanakomana vayo zvisina kunaka, sokunge kuti havasi vayo+—Kushanda kwayo zvakaoma hakuna zvakunobatsira, nokuti haityi. 17 Nokuti Mwari akaita kuti ikanganwe uchenjeri,Uye haana kuipa mugove wokunzwisisa.+ 18 Panguva yainobhabhamisira mapapiro ayo kumusoro,Inoseka bhiza nomutasvi waro. 19 Ungapa bhiza simba here?+Ungapfekedza mutsipa waro zenze rinopepereka here? 20 Ungaita kuti rikwakuke sezvinoita mhashu here?Simba rokupfepfedza kwaro rinotyisa.+ 21 Rinobinha+ pasi mubani ropembera nesimba richifara;Rinoenda kunosangana nezvombo.+ 22 Rinoseka kutya, uye harivhunduki;+Uyewo haridzoki nokuda kwebakatwa. 23 Goba rinorira pamusoro paro,Chipasa chepfumo nepfumo duku. 24 Rinopedza nyika nokutinhidza pasi nehasha,Uye haritendi kuti ihwamanda iri kurira. 25 Panongorira hwamanda rinoti Hekani!Rinofembedza hondo iri kure,Mheremhere yevakuru vakuru nokushevedzera nokuda kwehondo.+ 26 Kunzwisisa kwako here kunoita kuti rukodzi rubhururuke,Kuti rutambanudzire mapapiro arwo kumhepo yokumaodzanyemba? 27 Kana kuti ndiwe here unorayira gondo+ kuti ribhururukire kumusoroUye kuti rivakire dendere raro pakakwirira,+ 28 Kuti rigare paibwe rorara ipapo usikuPazino redombo nepanzvimbo isingasvikiki? 29 Rinotsvaka zvokudya riri ipapo;+Maziso aro anoramba achitarira kure kure. 30 Vana varo vanoramba vachisveta ropa;Uye pane zvakaurayiwa, ndipo pariri.”+